स्वाईन फ्लुबाट कसरी बच्ने ? – Ram Kumar Pariyar
Next वैदेशिक रोजगारमा हुनेहरूका लागि सुरक्षीत लगानीको अवसर !!!
Previous बोक्सी आरोपमा मलमुत्र खुवाउनेहरु पक्राउ
स्वास्थ · २०७१ फाल्गुन १४ 0
रामकुमार परियार |	२०७१ फाल्गुन १४
सन् २००९ ताका माहामारीका रुपमा फैलिएको स्वाइन फ्लुको प्रकोप पुनः देखिन थालेको छ । सन् २०१५ मात्र छिमेकी मुलुक भारतमा यस रोगबाट ८ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १४ हजारभन्दा बढी संक्रमित बनेका छन् । नेपालमा पनि हालसम्म ५ जना यस रोगबाट संक्रमित भइसकेको पुष्टि भएको छ । खुला सिमानाका कारण भारतबाट यस रोगबाट ग्रसितहरु नेपाल सजिलै प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै नाकाहरुमा सरकारले कढाई समेत शुरु गरिसकेको छ ।
स्वाइन फ्लु भनेको एक प्रकारको स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हो जुन सुंगुरको स्वास नलीलाई संक्रमित गर्ने इन्फ्लुएन्जा भाइरस यानी एच वान एन वान भाइरसका कारण लाग्ने गर्छ । चाँडै संक्रमित हुनसक्ने स्वाइन फ्लु मानिसबाट मानिससम्म हावा, सिगान वा थुकबाट सर्न सक्छ ।
यस भाइरसबाट संक्रमित बनेका मानिसहरुले हाच्छ्यु गर्दा उसको मुखबाट भाइरस हावामा पुग्छ । यदी तपाईं उक्त भाइरसँग सम्पर्कमा आउनुभयो भने तपाईंलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ । त्यस्तै स्वाइन फ्लु रोगबाट संक्रमित बनेकाहरुले प्रयोग गरेका समान जस्तै ढोका वा हात धुने बेसन आदिको तत्काल सम्पर्कमा आउँदा पनि यो रोग सर्न सक्छ । एकपटक यस एचवान एनवान भाइरसबाट संक्रमित बनेपछि मानिस १० दिनसम्म रोगको संक्रमणमा रहन सक्छन् । यद्यपि, यसको नाम अनुसार सुंगुरको मासु वा अन्य परिकार खाँदैमा यो रोग सर्दैन ।
२) ज्वरो आउने
यस रोगबाट निम्न व्यक्तिहरुलाई बढी खतरा हुन्छः
५ वर्षभन्दा मूनिका बालबालिकाहरुलाई
६५ वर्षभन्दा बढीका मानिसहरुलाई
फोक्सो, मुटु, कलेजो, रगत, स्नायु प्रणाली र पाचन प्रक्रियासम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई
एचआइभीबाट संक्रमित र प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएकाहरुलाई
अन्य रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई
साझा प्रकाशनको मनोनयनमा भट्टराईको कटाक्ष